ShwengweGames - Page 219 of 222 - News & Media
ကိုယ်ဝန် ဆောင်စဉ် သားကောင်းသမီးမြတ် ရရှိစေသော ဂါထာတော်
April 13, 2020 by Shwengwe Games
သားေ ကာင်းသားမြတ် ရစေသော ဂါထာ(ပဋိသန္ဓေတည်နေစဉ် ရွတ်ဆိုရန်)ယော မေ အယံ ဘန္တေ ကု စ္ဆိတော ကုမာရကော ဝါ ကုမာရိကာ ဝါ
၊သော ဘဂဝန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆတိ ဓမ္မဉ္စ ဘိက္ခု သံဃဉ္စ၊ ဥပါသကံ တံ ဘဂဝါ ဓာရေတု အဇ္ဇတဂ္ဂေ ပါဏုပေတံ သရဏံ ဂတံ။
(မ-၂-၃၀၀)ဘန္တေ- အရှင်ဘုရား၊ မေ- တပည့်တော်၏၊ ကု စ္ဆိတော- ဝမ်း၌တည်သော၊
ယော အယံကုမာရောဝါ-အကြင် သတို့ သားသည်သော်လည်းကောင်း၊ ယာအယံကုမာရိကာဝါ- အကြင်သတို့သမီးသည်သော်လည်းကောင်း၊
အတ္ထိ-ရှိ၏။ သော -ထိုသန္ဓေသားသည်၊ ဘဂဝန္တံ- မြတ်စွာဘုရားကို၊ သရဏံ- ကိုးကွယ်ရာဟူ၍၊ ဂစ္ဆတိ-ဆည်းကပ်ပါ၏။
ဓမ္မဉ္စ-တရားတော်ကိုလည်းကောင်း၊ ဘိက္ခုသံဃဉ္စ-ရဟန်းသံဃာကိုလည်း ကောင်း၊ သရဏံ – ကိုးကွယ်ရာဟူ၍၊ ဂစ္ဆတိ-ဆည်းကပ်ပါ၏။
ဘဂဝါ-မြတ်စွာဘုရားသည်၊ တံံ-ထိုသန္ဓေသားကို၊ အဇ္ဇတဂ္ဂေ-ယနေ့ကိုအစပြု၍၊ ပါဏုပေတံ-အသက်ထက်ဆုံး၊ သရဏံ- ကိုးကွယ်ရာဟု၊
ဂတံ-ဆည်းကပ်သော၊ ဥပါသကံ- ရတနာသုံးပါး ဆည်းကပ်တတ်သူဟူ၍၊ ဓာရေတု- မှတ်တော်မူပါအရှင်ဘုရား။
(မြန်မာပြန်) မြတ်စွာဘုရား ဘုရားတပည့်တော်၏ ဝမ်း၌ တည်ရှိနေသောကလေးငယ်သည်မြတ်စွာဘုရားအား လည် းကောင်း၊ တရားတော်အားလည်း ကောင်း၊ သံံဃာတော်အားလည်း ကောင်း၊
ကိုးကွယ်ရာအစစ်ဟူ၍ဆည်းကပ်ပါ၏ဘုရား။ထိုသန္ဓေသားအား ယနေ့မှစပြီးအသက်ထက်ဆုံးသရဏဂုံတည်သူဟူ၍ မှတ်တော် မူပါဘုရား။ဖေဖေမေမေတို့ သားကောင်းသမီးမြတ်ကလေးများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ
ကိုယ္ဝန္ေ ဆာင္ စဥ္ သားေကာ င္းသမီးျမတ္ ရရွိေစေသာ ဂါထာေတာ္
သားေ ကာင္းသားျမတ္ ရေစေသာ ဂါထာ(ပဋိသေႏၶတည္ေနစဥ္ ႐ြတ္ဆိုရန္)ေယာ ေမ အယံ ဘေႏၲ ကု စၦိေတာ ကုမာရေကာ ဝါ ကုမာရိကာ ဝါ
၊ေသာ ဘဂဝႏၲံ သရဏံ ဂစၦတိ ဓမၼၪၥ ဘိကၡဳ သံဃၪၥ၊ ဥပါသကံ တံ ဘဂဝါ ဓာေရတု အဇၨတေဂၢ ပါဏုေပတံ သရဏံ ဂတံ။
(မ-၂-၃၀၀)ဘေႏၲ- အရွင္ဘုရား၊ ေမ- တပည့္ေတာ္၏၊ ကု စၦိေတာ- ဝမ္း၌တည္ေသာ၊
ေယာ အယံကုမာေရာဝါ-အၾကင္ သတို႔ သားသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယာအယံကုမာရိကာဝါ- အၾကင္သတို႔သမီးသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အတၳိ-ရွိ၏။ ေသာ -ထိုသေႏၶသားသည္၊ ဘဂဝႏၲံ- ျမတ္စြာဘုရားကို၊ သရဏံ- ကိုးကြယ္ရာဟူ၍၊ ဂစၦတိ-ဆည္းကပ္ပါ၏။
ဓမၼၪၥ-တရားေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘိကၡဳသံဃၪၥ-ရဟန္းသံဃာကိုလည္း ေကာင္း၊ သရဏံ – ကိုးကြယ္ရာဟူ၍၊ ဂစၦတိ-ဆည္းကပ္ပါ၏။
ဘဂဝါ-ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ တံံ-ထိုသေႏၶသားကို၊ အဇၨတေဂၢ-ယေန႕ကိုအစျပဳ၍၊ ပါဏုေပတံ-အသက္ထက္ဆုံး၊ သရဏံ- ကိုးကြယ္ရာဟု၊
ဂတံ-ဆည္းကပ္ေသာ၊ ဥပါသကံ- ရတနာသုံးပါး ဆည္းကပ္တတ္သူဟူ၍၊ ဓာေရတု- မွတ္ေတာ္မူပါအရွင္ဘုရား။
( ျမန္မာျပန္) ျမတ္စြာဘုရား ဘုရား တပည့္ေတာ္၏ ဝမ္း၌တည္ရွိေနေသာ ကေလးငယ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား လည္းေကာင္း၊ တရားေတာ္အားလည္း ေကာင္း၊ သံံဃာေတာ္အားလည္း ေကာင္း၊
ကိုးကြယ္ရာအစစ္ဟူ၍ဆည္းကပ္ပါ၏ ဘုရား။ထိုသေႏၶသားအား ယေန႕မွစၿပီးအသက္ထက္ဆုံးသရဏဂုံတည္သူဟူ၍ မွတ္ေတာ္ မူပါဘုရား။ေဖေဖေမေမတို႔ သားေကာင္းသမီးျမတ္ကေလးမ်ား ပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစ
ဗိုက်ကြောပြတ် ပေါင်ကြောပြတ်ပီး အသားအရည်တွန့်နေတာတွေအတွက် ဆေးကောင်းတလက်
ကိုယ်တိုင်အရင်ကပေါင်ကြောပြတ်ဖူးလို့ အိမ်မှာလုပ်ပီးအသုံးပြုနေတာနှစ်နဲ့ချီနေပါပီနော်။‌တကယ်လည်းကောင်းလို့ ပြန် လည်မျှဝေပေးလိုက်တာပါ။ပိုက်ဆံမကုန်ပဲထိရောက်တဲ့ဆေးလေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်လို့ပဲဗိုက်ကြောပြတ် ပြတ် / ဝလာလို့ပဲပေါင်ကြောပြတ်ပြတ် ဘယ်လိုအကြောင်းရာကြောင့်ပေါင်ကြောပြတ်ပြတ်ဆေးကောင်းရှိပါတယ်နော် လုပ်ရတာလည်းမခက်ပဲအရမ်းကို လွယ်ကူ ရိုးရှင်းပါတယ်။
ရှားစောင်းလက်ပတ်အပင်ကြီးက အနှစ်တုံးငါးခုခြောက်ခုခန့်နဲ့ အုန်းဆီစစ်စစ်၊ သံပုရာအနည်းငယ်ပဲလိုတာပါနော်။ အုန်း ဆီက M150 ပုလင်း တစ်ပုလင်းခွဲလိုပါတယ်။
သံအိုးတစ်ခုထဲမှာရှားစောင်းအနှစ်ချည်းထည့်ပါ။ အုန်းဆီလောင်းထည့်ပါ။ အဲ့ဒီအိုးကိုမီးဖိုပေါ်တင်ပီးမီးခပ်အေးအေးလေးနဲ့သာပေးဆူထားပါ။မိနစ် 30ခန့်တည်ပီးရှားစောင်းတွေမဲတဲ့ထိတည်ပီး မီးဖိုပေါ်မှချကာရှားစောင်းအမဲတွေကိုဖယ်ပါ။ဆီရည်တွေကိုဖန်ဘူးတစ်ခုတည်း လောင်းထည့်ထားပါ။
အကြောပြတ်တဲ့နေရာတွေကိုထိုဆီရေဖြင့်အသားထဲစိမ့်ဝင်အောင်နေ့စဉ်တစ်ကြိမ်မှနှစ်ကြိမ်လိမ်းပေးသွားရင်သိသိသာသာတစ်ပတ်အတွင်းလျော့လာမှာပါ။ဂျွတ်တတ်နေတဲ့ နေရာတွေနဲ့ အမာ ရွတ်နေရာတွေကိုသံပုရာရည်အနည်းငယ် ရောစပ်ကာလိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်နော်။ နှစ်ပတ်အတွင်းလျော့သွားမှာပါ။ညအိပ်ခါနီးတိုင်း Bodyအနှံ့ လိမ်းပေးသွားရင်လည်းစိုပြေဝင်းလက်တင်းရင်းတဲ့ အ သားအရည်ကို ရစေမှာပါနော်။
ဗိုက္ေၾကာျပတ္ ေပါင္ေၾကာျပတ္ပီး အသားအရည္တြန႔္ေနတာေတြအတြက္ ေဆးေကာင္းတလက္
ကိုယ္တိုင္အရင္ကေပါင္ေၾကာျပတ္ဖူးလို႔ အိမ္မွာလုပ္ပီးအသုံးျပဳေနတာႏွစ္နဲ႕ခ်ီေနပါပီေနာ္။‌တကယ္လည္းေကာင္းလို႔ ျပန္ လည္မွ်ေဝေပးလိုက္တာပါ။ပိုက္ဆံမကုန္ပဲထိေရာက္တဲ့ေဆးေလးပါ။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္လို႔ပဲဗိုက္ေၾကာျပတ္ ျပတ္ / ဝလာလို႔ပဲေပါင္ေၾကာျပတ္ျပတ္ ဘယ္လိုအေၾကာင္းရာေၾကာင့္ေပါင္ေၾကာျပတ္ျပတ္ေဆးေကာင္းရွိပါတယ္ေနာ္ လုပ္ရတာလည္းမခက္ပဲအရမ္းကို လြယ္ကူ ရိုးရွင္းပါတယ္။
ရွားေစာင္းလက္ပတ္အပင္ႀကီးက အႏွစ္တုံးငါးခုေျခာက္ခုခန႔္နဲ႕ အုန္းဆီစစ္စစ္၊ သံပုရာအနည္းငယ္ပဲလိုတာပါေနာ္။ အုန္း ဆီက M150 ပုလင္း တစ္ပုလင္းခြဲလိုပါတယ္။
သံအိုးတစ္ခုထဲမွာရွားေစာင္းအႏွစ္ခ်ည္းထည့္ပါ။ အုန္းဆီေလာင္းထည့္ပါ။ အဲ့ဒီအိုးကိုမီးဖိုေပၚတင္ပီးမီးခပ္ေအးေအးေလးနဲ႕သာေပးဆူထားပါ။မိနစ္ 30ခန႔္တည္ပီးရွားေစာင္းေတြမဲတဲ့ထိတည္ပီး မီးဖိုေပၚမွခ်ကာရွားေစာင္းအမဲေတြကိုဖယ္ပါ။ဆီရည္ေတြကိုဖန္ဘူးတစ္ခုတည္း ေလာင္းထည့္ထားပါ။
အေၾကာျပတ္တဲ့ေနရာေတြကိုထိုဆီေရျဖင့္အသားထဲစိမ့္ဝင္ေအာင္ေန႕စဥ္တစ္ႀကိမ္မွႏွစ္ႀကိမ္လိမ္းေပးသြားရင္သိသိသာသာတစ္ပတ္အတြင္းေလ်ာ့လာမွာပါ။ဂြၽတ္တတ္ေနတဲ့ ေနရာေတြနဲ႕ အမာ ႐ြတ္ေနရာေတြကိုသံပုရာရည္အနည္းငယ္ ေရာစပ္ကာလိမ္းေပးနိုင္ပါတယ္ေနာ္။ ႏွစ္ပတ္အတြင္းေလ်ာ့သြားမွာပါ။ညအိပ္ခါနီးတိုင္း Bodyအႏွံ႕ လိမ္းေပးသြားရင္လည္းစိုေျပဝင္းလက္တင္းရင္းတဲ့ အ သားအရည္ကို ရေစမွာပါေနာ္။
စိုင်းစိုင်းနဲ့ လူချင်းမနီးသော်လည်း နှလုံးသားချင်းနီးပါတယ်ဆိုတဲ့ ဘေဘီပွင့်
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေသိကြတဲ့အတိုင်း ဧပြီလ (၁၀) ရက်နေ့ကတော့ တေးသံရှင် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပရိသတ်တွေအများကြီးနဲ့အတူ Sai Sai Birthday Show ကြီးကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပလေ့ရှိပြီး လူတွေ တိုးမပေါက်အောင် လာရောက်အားပေးကြတာကိုတော့ ပရိသတ်တွေသိပြီဖြစ်မှာပါနော် ။ ဒီနှစ်အတွက်ကတော့ Covid-19 ကြောင့် လူစုလူဝေးတွေ မပြုလုပ်ရတဲ့အတွက် စိုင်းစိုင်းတစ်ယောက် ထူးခြားတဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ် ။
ဒီနှစ်မွေးနေ့လေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ Stay home လုပ်နေရတဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက် Sai Sai Birthday Show in Bedroom ဆိုတဲ့ အစီစဉ်လေးနဲ့အတူ အိပ်ခန်းထဲကနေ ပရိသတ်တွေ အားလုံးကို Live လွှင့်ပြီး ဖျော်ဖြေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်း စိုင်းစိုင်းအတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးခဲ့ကြသလို ပရိသတ်တွေချစ်ရတဲ့ ဟာသ သရုပ်ဆောင် ပွင့်ကလည်း ထူးခြားတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးကို တောင်းပေးခဲ့ပါတယ် ။
Happy birthdayပါ ကိုကိုစိုင်းစိုင်း Stay at home မို့အတူမရှိနိုင်တဲ့ မွေးနေ့ညလေးပေါ့ လူချင်းအတူမရှိပေမယ့် နှလုံးသားချင်းနီးနေပါ့မယ် Love u ko ko ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ သူမရဲ့ လူမှုကွန်စာမျက်နှာထက်ကနေ စိုင်းအတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ဘေဘီပွင့်တို့ နှစ်ယောက်လိုပဲ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းနဲ့အညီ အဝေးကပဲချစ်ကြရမယ်နော်ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကိုလည်း အရွှန်းဖောက်စနောက်ထားတာတွေ့ရပါတယ် ။ ပရိသတ်ကြီးရေ.. ပွင့်ကလည်း စိုင်းကိုချစ်တဲ့အမာခံဖန်တစ်ယောက်ပါတဲ့နော် ။
စိုင္းစိုင္းနဲ႔ လူခ်င္းမနီးေသာ္လည္း ႏွလုံးသားခ်င္းနီးပါတယ္ဆိုတဲ့ ေဘဘီပြင့္
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးက ပရိသတ္ေတြသိၾကတဲ့အတိုင္း ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔ကေတာ့ ေတးသံ႐ွင္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ရဲ႕ ေမြးေန႔ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ပရိသတ္ေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔အတူ Sai Sai Birthday Show ႀကီးကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပေလ့႐ွိၿပီး လူေတြ တိုးမေပါက္ေအာင္ လာေရာက္အားေပးၾကတာကိုေတာ့ ပရိသတ္ေတြသိၿပီျဖစ္မွာပါေနာ္ ။ ဒီႏွစ္အတြက္ကေတာ့ Covid-19 ေၾကာင့္ လူစုလူေဝးေတြ မျပဳလုပ္ရတဲ့အတြက္ စိုင္းစိုင္းတစ္ေယာက္ ထူးျခားတဲ့ေမြးေန႔ပြဲေလးကိုက်င္းပခဲ့ပါတယ္ ။
ဒီႏွစ္ေမြးေန႔ေလးရဲ႕ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ Stay home လုပ္ေနရတဲ့ ပရိသတ္ေတြအားလုံးအတြက္ Sai Sai Birthday Show in Bedroom ဆိုတဲ့ အစီစဥ္ေလးနဲ႔အတူ အိပ္ခန္းထဲကေန ပရိသတ္ေတြ အားလုံးကို Live လႊင့္ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။ အႏုပညာ႐ွင္ေတြနဲ႔ခ်စ္ရတဲ့ ပရိသတ္ေတြအားလုံးကလည္း စိုင္းစိုင္းအတြက္ ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္းေတြေတာင္းေပးခဲ့ၾကသလို ပရိသတ္ေတြခ်စ္ရတဲ့ ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပြင့္ကလည္း ထူးျခားတဲ့ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေလးကို ေတာင္းေပးခဲ့ပါတယ္ ။
Happy birthdayပါ ကိုကိုစိုင္းစိုင္း Stay at home မို႔အတူမ႐ွိႏိုင္တဲ့ ေမြးေန႔ညေလးေပါ့ လူခ်င္းအတူမ႐ွိေပမယ့္ ႏွလုံးသားခ်င္းနီးေနပါ့မယ္ Love u ko ko ဆိုတဲ့ စာသားေလးနဲ႔အတူ သူမရဲ႕ လူမႈကြန္စာမ်က္ႏွာထက္ကေန စိုင္းအတြက္ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။ ေဘဘီပြင့္တို႔ ႏွစ္ေယာက္လိုပဲ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းနဲ႔အညီ အေဝးကပဲခ်စ္ၾကရမယ္ေနာ္ဆိုၿပီး ပရိသတ္ေတြကိုလည္း အ႐ႊန္းေဖာက္စေနာက္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္ ။ ပရိသတ္ႀကီးေရ.. ပြင့္ကလည္း စိုင္းကိုခ်စ္တဲ့အမာခံဖန္တစ္ေယာက္ပါတဲ့ေနာ္ ။
မြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေအတွက် စင်ကာပူမှာcovid 19positive နဲ့ဆေးရုံတက်နေရတဲ့ Zin Min Ko Ko ရေးတဲ့စာ
ကျွန်တော်နေမကောင်းပါဘူးအခုလည်းcovid 19positive နဲ့ဆေးရုံတက်နေရတာပါကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတွေသိပါတယ်မြန်မာလူငယ်တွေညီလေးညီမလေးတွေ အကိုကြီးတွေ တစ်ချိန်တုန်းကဘယ်လိုနေခဲ့နေခဲ့ အခုချိန်တော့အိမ်မှာနေကြပါ
မြန်မာလူငယ်တွေကစာဖတ်ရမှာပျင်းတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်လည်းလူငယ်ပဲလေ ကိုယ်ချင်းစာတက်တာပေါ့ဒါပေမယ့်အခုချိန်မှာတော့သတင်းပုံမှန်ဖတ်ပါတစ်ကမ္ဘာလုံး ဖြစ်နေတဲ့ကပ်ရောဂါကို ပေါ့ပေါ့လေးမထင်ကြပါနဲ့
ညီအကိုတွေကို အရမ်းချစ်လို့သတိပေးမယ် သေတက်တယ်နော်သတိထားရမယ့်အချိန်ပါအပျော်တွေနည်းနည်းလျော့သင့်ပါတယ်
မကြောက်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ညီအကိုတွေကိုကိုယ်တွေ့လေးပြောပြမယ်ကျွန်တော်က marine machenic နဲ့ singapore က east marine မှာလုပ်နေတာပါ
ကျွန်တော်ရောဂါကူးရတာက ကျွန်တော့အရာရှိဆီကလို့ပြောရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့သတိထားတယ် ကာကွယ်တယ် လက်ခဏခဏဆေးတယ် maskကိုတစ်ရှူးလိုလဲသုံးနိုင်တယ်
အရာရှိမှာ positive ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတာနဲ့ ကျွန်တော့ဘဝကအဲ့ကစပြီးအိမ်မက်ဆိုးကြီးမတ်ခဲ့ရတာကျွန်တော့်ကိုတစ် ယောက်တည်းတစ်ခန်းထဲမှာထားခဲ့တယ် ၄ရက်ကြာတယ်
ထမင်းလာပို့ရင် အခန်းဝမှာထမင်းထုတ်ချပြီးအဝေးပြန်ရောက်မှ လှမ်းအော်တယ်အနီးနားကိုဘယ်သူမှမလာရဲဘူး၊ တစ်ခုခုလာပို့ရင် နင်ဂျာလိုပဲ ကာထားလိုက်တာ ကြောက်လို့
အပြင်မှာနေ့လားညလားမသိခဲ့ဘူးအဲ့လေးရက်မှာ အိပ်ယာနိုးလို့ကြည့်ရင် အပြင်ကိုပြူတင်းပေါက်ကချောင်းကြည့်ရတယ် လင်းနေရင်နေ့ဘက်ပေါ့.
Ambulance လာခေါ် မှသွားလို့ရတာအဲညကဆေးစစ်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်၃ရက် နေရင်resultထွက်မယ်ပြောလိုက်တယ်
Result ထွက်တော့ ဆေးရုံကဖုန်းဆက်တယ် Hello…Mr.Zin Min Ko Ko.Now we get your covid results coming….so sorry sir you are covid positive. So you dont go any place.. within one or two hrs we pick up you…တဲ့
အရမ်းကြောက်တယ်ဝမ်းနည်းတယ်အား ငယ်တယ်အားကိုးစရာမိဘ ဆွေမျိုးရှိရင်တောင် လာလို့မရဘူး လူနာကို ဘယ်သူနဲ့မှပေးမတွေ့ဘူး
အဲ့နောက် ကျွန်တော့်ကို Singapore ကပဲ alexander hospital ကို ခေါ်သွားခဲ့တယ်ရောက်ရောက်ချင်းပဲ သွေ းပေါင်ချိန်တယ် ecgဆွဲတယ် temperature check တယ်
အဲ့နောက် နှစ်နာရီတစ်ခါလာတော့တာပဲ အဆိုးဆုံးက ရောဂါစစ်ဖို့သွေးဖောက်တာပဲ လက်မဝက်လောက်ရှိပြီးတစ်မိုက်ကျော်တဲ့ဖန်ပုလင်းနဲ့တစ်ခါထုတ်ရင်၄လုံးလောက်ထုတ်တော့တာပဲ
ရောဂါပြန်စစ်ဖို တစ်ထွာကျော်တဲ့ ပိုက်ကိုနာခေါင်းထဲကနေ နားရောက်တဲ့အထိထိုးထည့်တာ နာလားမမေးနဲ့ ယောကျာ်းကြီးတွေမျက်ရည်ကျတယ်
ဆေးမတိုက်ဘူးအစာနဲ့ရောဂါတိုက်ထုတ်တာ ဆေးရုံမှာ လေးရက်ထပ်နေပြီးလို့ အခု CIF ရောက်နေပြန်ပြီ အခုနေရာမှာ 14ရက်ထပ်နေရအုန်းမယ်တစ်ယောက်တည်းနော် အဖော်မရှိဘူး
တစ်ယောက်တည်းအေးဆေးကောင်းတာပေါ့လို့မတွေးနဲ့ လူသံမကြားရဘဲအခန်းထဲအကြာကြီးနေကြည့် ရူးသွားနိုင်တယ်
ဒါကြောင့် ကြောက်ကြပါလို့ပြောတာအခုခံစားရတဲ့ဝေသနာတွေကိုမပြောတော့ဘူးတစ်ယောက်တည်းနေရတဲ့ဝေသနာကိုအရင်ခံစားနိုင်ရင်အပြင်ထွက်ကြပေါ့ သူငယ်ချင်းတို့အားလုံးရဲ့ မေတ္တာ တို့ဖြင် သက်သာနေပါပြီ
Zin Min Ko Ko
ဒီနေ့မှာပဲ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဟာသသရုပ်ဆောင် မျိုးမင်းဦး( ခ )အရှည်ကြီး
ရုပ်ရှင်ဟာသသရုပ်ဆောင် မျိုးမင်းဦး( ခ )အရှည်ကြီး1242020 တနင်္ဂနွေ နေ့ဆုံးသွားပါပြီ ချက်ခြင်း သဂြိုလ်လိုက်ပါသည်
1842020ရက်လည်ဆွမ်းကပ်လျူပါမည် အနုပညာလောကသားများ အားအသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။တချိန်တုန်းက ဦးရှံစါးဦးဒိန်းဒေါင်
Source- Than Sein.Credit-Lwin Oo
ဒီေန႕မွာပဲ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ မ်ိဳးမင္းဦး( ခ )အရွည္ႀကီး
႐ုပ္ရွင္ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ မ်ိဳးမင္းဦး( ခ )အရွည္ႀကီး1242020 တနဂၤေႏြ ေန႕ဆုံးသြားပါၿပီ ခ်က္ျခင္း သၿဂိဳလ္လိုက္ပါသည္
1842020ရက္လည္ဆြမ္းကပ္လ်ဴပါမည္ အႏုပညာေလာကသားမ်ား အားအသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။တခ်ိန္တုန္းက ဦးရွံစါးဦးဒိန္းေဒါင္
COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၁၃-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက်(၀၀:၃၀) နာရီ
၁။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ (၁၂-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများအရ စောင့်ကြည့်လူနာများ၊ ဆေးရုံများနှင့် သက်ဆိုင်ရာနေရာများတွင် အသွားအလာကန့်သတ်၍ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုခံနေသူများ စုစုပေါင်း (၂၇၈)ဦး၏ ဓာတ်ခွဲ နမူနာများအားစစ်ဆေးခဲ့ရာ ဇယား (၁) ၌ ဖော်ပြထားရှိသော လူနာ (၂) ဦးနှင့် (၁၂-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ည (၈:၀၀)နာရီသတင်းတွင်ဖော်ပြထားရှိသော လူနာ (၁) ဦး၊စုစုပေါင်း (၃)ဦး၏ဓာတ်ခွဲအဖြေတွင် COVID-19 ရောဂါပိုး တွေ့ရှိ (တွေ့ရှိ)ရပြီးကျန်လူနာများနှင့်စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုမှုခံနေသူ (၂၇၅) ဦး၏ဓာတ်ခွဲအဖြေများတွင် COVID-19 ရောဂါပိုး မရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
၂။ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (Case-040) သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သော အသက် (၆၈) နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီးဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (Case-08) နှင့် (Case-028) တို့နှင့်အတူနေမိသားစုဝင်များဖြစ်ပါသည်။ (Case-08) အား ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးနောက် လူနာမှာ (၂၈-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် (Case-028) နှင့်အတူနေအိမ်၌အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်းပြုလုပ်ထားရှိပါသည်။အဆိုပါလူနာအား (၉-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ဓာတ်ခွဲနမူနာရယူစစ်ဆေးခဲ့ပြီးယင်းနေ့တွင်ပင်အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှု ဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်)၏ဓာတ်ခွဲအဖြေအရ ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိရကြောင်း သိရှိရပါသည်။သို့သော်လည်းလူနာမှာမောခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း လက္ခဏာများခံစားခဲ့ရသဖြင့် (၁၂-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင်မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့သွားရောက်ပြသခဲ့ရာ၎င်းအားစောင့်ကြည့် လူနာအဖြစ်သတ်မှတ်၍ဓာတ်ခွဲနမူနာထပ်မံရယူစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါလူနာတွင်သွေးတိုးရောဂါနှင့်နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါအခံများရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။
၃။ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (Case-041)သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သော အသက် (၃၈) နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး(၆-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှစတင်၍ဖျားခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ကိုယ်လက်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊နုံးချိခြင်းစသောလက္ခဏာများ ခံစားခဲ့ရသော်လည်းရောဂါလက္ခဏာမှာ ပြင်းထန်ခြင်းမရှိသဖြင့်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ပြသခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါလူနာသည် (Case-024)၊ (Case-034)၊ (Case-035)၊ (Case-036) နှင့် (Case-037) တို့နှင့် ဘာသာရေးအခမ်းအနားအတူတက်ရောက်ခဲ့ဖူးသည့်ရာဇဝင်ရှိ ကြောင်း သိရှိရပါသည်။လူနာသည် (၁၂-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင်ဖျားခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲခြင်းစသော လက္ခဏာများထပ်မံခံစားခဲ့ရသဖြင့် အင်းစိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့သွားရောက်ပြသခဲ့ရာ ၎င်းအားစောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ်သတ်မှတ်၍ဓာတ်ခွဲနမူနာရယူစစ်ဆေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီးအင်းစိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံကြီးသို့ လွှဲပြောင်း ကုသရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၄။ယခုအခါ (၂၃-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၁၂-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ ည (၁၂:၀၀)နာရီအချိန်အထိမြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (၄၁) ဦး တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၅။သို့ဖြစ်ရာ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများမှာ ချင်းပြည်နယ်၊တီးတိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင်(၃)ဦး၊ ရန်ကုန်မြို့၊ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံကြီးတွင် လူနာ (၂၇)ဦး၊ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ လားရှိုးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင်(၁)ဦး၊မော်လမြိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး တွင် လူနာ (၁)ဦး၊စဝ်စံထွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင်လူနာ (၁)ဦးနှင့်မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင်လူနာ (၁)ဦး၊စုစုပေါင်း(၃၄)ဦးတို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာတည်ငြိမ်လျက်ရှိပါသည်။ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံကြီးရှိလူနာ(၁) ဦးအားအထူးကြပ်မတ်ခန်း၌သီးခြားထားရှိ ဆေးကုသမှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
၆။အဆိုပါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သူများအားလုံးကို ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ရှာဖွေစုံစမ်းဖော်ထုတ်၍ အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း၊ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍အဆိုပါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများနှင့်အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့သည့် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် နီးစပ်ရာ ကျန်းမာရေးဌာနသို့ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားစေလိုကြောင်း တိုက်တွန်းအပ်ပါ သည်။
၇။ လတ်တလော ထပ်မံထုတ်ပြန်ရန် ဓာတ်ခွဲအဖြေသတင်းများ မရှိတော့ပါ။
COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း(၁၃-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၀၀:၃၀) နာရီ
၁။အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ရန္ကုန္) မွ(၁၂-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ေစာင့္ၾကည့္လူနာမ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္အသြားအလာကန္႔သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈခံေနသူမ်ား စုစုေပါင္း (၂၇၈)ဦး၏ ဓာတ္ခြဲ နမူနာမ်ားအားစစ္ေဆးခဲ့ရာဇယား(၁)၌ ေဖာ္ျပထား႐ွိေသာလူနာ (၂) ဦးႏွင့္ (၁၂-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ည(၈:၀၀)နာရီသတင္းတြင္ေဖာ္ျပထား႐ွိေသာလူနာ(၁)ဦး၊စုစုေပါင္း(၃)ဦး၏ဓာတ္ခြဲအေျဖတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕႐ွိ(ေတြ႕႐ွိ)ရၿပီးက်န္လူနာမ်ားႏွင့္ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈမႈခံေနသူ(၂၇၅)ဦး၏ဓာတ္ခြဲအေျဖမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး မ႐ွိေၾကာင္းေတြ႕႐ွိရပါသည္။
၂။ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ(Case-040)သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာအသက္(၆၈) ႏွစ္အ႐ြယ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီးဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (Case-08) ႏွင့္(Case-028)တို႔ႏွင့္အတူေနမိသားစုဝင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။(Case-08)အားဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လူနာမွာ (၂၈-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္(Case-028) ႏွင့္အတူေနအိမ္၌အသြားအလာကန္႔သတ္ျခင္းျပဳလုပ္ထား႐ွိပါသည္။အဆိုပါလူနာအား(၉-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဓာတ္ခြဲနမူနာရယူစစ္ေဆးခဲ့ၿပီးယင္းေန႔တြင္ပင္အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ရန္ကုန္)၏ဓာတ္ခြဲအေျဖအရ ေရာဂါပိုးမေတြ႕႐ွိရေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။သို႔ေသာ္လည္းလူနာမွာေမာျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း လကၡဏာမ်ားခံစားခဲ့ရသျဖင့္(၁၂-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ေျမာက္ဥကၠလာပျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးသို႔သြားေရာက္ျပသခဲ့ရာ၎အားေစာင့္ၾကည့္ လူနာအျဖစ္သတ္မွတ္၍ဓာတ္ခြဲနမူနာထပ္မံရယူစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါလူနာတြင္ေသြးတိုးေရာဂါႏွင့္နာတာ႐ွည္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါအခံမ်ား႐ွိေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။
၃။ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (Case-041)သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ (၃၈) ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး(၆-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔မွစတင္၍ဖ်ားျခင္း၊ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ကိုယ္လက္နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း၊ႏုံးခ်ိျခင္းစေသာလကၡဏာမ်ား ခံစားခဲ့ရေသာ္လည္းေရာဂါလကၡဏာမွာ ျပင္းထန္ျခင္းမ႐ွိသျဖင့္ေဆး႐ုံသို႔ သြားေရာက္ျပသခဲ့ျခင္းမ႐ွိေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။အဆိုပါလူနာသည္ (Case-024)၊ (Case-034)၊ (Case-035)၊ (Case-036) ႏွင့္ (Case-037) တို႔ႏွင့္ ဘာသာေရးအခမ္းအနားအတူတက္ေရာက္ခဲ့ဖူးသည့္ရာဇဝင္႐ွိ ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။လူနာသည္ (၁၂-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ဖ်ားျခင္း၊ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင့္ကိုယ္လက္ကိုက္ခဲျခင္းစေသာ လကၡဏာမ်ားထပ္မံခံစားခဲ့ရသျဖင့္ အင္းစိန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးသို႔သြားေရာက္ျပသခဲ့ရာ ၎အားေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္သတ္မွတ္၍ဓာတ္ခြဲနမူနာရယူစစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီးအင္းစိန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးမွေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးသို႔ လႊဲေျပာင္း ကုသရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိပါသည္။
၄။ယခုအခါ (၂၃-၃-၂၀၂၀)ရက္ေန႔မွ (၁၂-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ည (၁၂:၀၀)နာရီအခ်ိန္အထိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၄၁) ဦး ေတြ႕႐ွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
၅။သို႔ျဖစ္ရာ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားမွာ ခ်င္းျပည္နယ္၊တီးတိန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံတြင္(၃)ဦး၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးတြင္လူနာ(၂၇)ဦး၊႐ွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊လား႐ိႈးျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးတြင္(၁)ဦး၊ေမာ္လၿမိဳင္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီး တြင္လူနာ (၁)ဦး၊စဝ္စံထြန္းျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးတြင္လူနာ(၁)ဦးႏွင့္ေျမာက္ဥကၠလာပျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးတြင္လူနာ(၁)ဦး၊စုစုေပါင္း(၃၄)ဦးတို႔ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာတည္ၿငိမ္လ်က္႐ွိပါသည္။ ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီး႐ွိလူနာ(၁) ဦးအားအထူးၾကပ္မတ္ခန္း၌သီးျခားထား႐ွိ ေဆးကုသမႈေပးလ်က္႐ွိပါသည္။
၆။အဆိုပါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ခဲ့သူမ်ားအားလုံးကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ႐ွာေဖြစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္၍ အသြားအလာကန္႔သတ္ျခင္း၊ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍အဆိုပါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားႏွင့္အနီးကပ္ထိေတြ႕ခဲ့သည့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းအပ္ပါ သည္။
၇။ လတ္တေလာ ထပ္မံထုတ္ျပန္ရန္ ဓာတ္ခြဲအေျဖသတင္းမ်ား မ႐ွိေတာ့ပါ။
ဆုတောင်းရာတွင် ပါဝင်မှုကြောင့်အဆိုတော်မျိုးကြီးမိသားစုကို Quarantine ဝင်ရန်ခေါ်ဆောင်
April 12, 2020 by Shwengwe Games
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ..မနေ့က ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Covid 19 အတည်ပြုလူနာထုတ်ပြန်ရာမှာ အင်းစိန်မြို့နယ်မှ လူနာ(၆)ဦးအထိပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့အထဲမှ Case(034-035-036-037)တို့ဟာ နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ဘုရားကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ ရာဇဝင်ရှိခဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့အထဲမှာ အဆိုတော့မျိုးကြီးလည်း ပါဝင်ခဲ့ပုံရပါတယ်။ထိုကြောင့် Case 037 ဟာ အဆိုတော်မျိုးကြီးဆိုပြီး သတင်းများထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
သိုသော် မျိုးကြီးရဲ့အမျိုးသမီးကတော့ Case 037 ဟာ မျိုးကြီးမဟုတ်ကြောင်းပြန်လည်ဖြေရှင်းထားပါတယ်။ရောဂါဖြစ်သူများနှင့်အတူ ဘုရားကျောင်းအတူတက်ခဲ့တာကြောင့် အဆိုတော်မျိုးကြီး ရဲ့မိသားစုအား Quarantine ဝင်ရန်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပြီးလူမှုကွန်ယက်မှာလည်း “နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းများကို လိုက်နာသွားမှပါလို့”ရေးသားထားပါတယ်။
ကိုမျိုးကြီးရေ ရောဂါပိုးမတွေ့ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် 🙏
ဆုေတာင္းရာတြင္ ပါဝင္မႈေၾကာင့္အဆိုေတာ္မ်ိဳးႀကီးမိသားစုကို Quarantine ဝင္ရန္ေခၚေဆာင္
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ..မေန႔က က်န္းမာေရးဝနႀကီးဌာနရဲ႕ Covid 19 အတည္ျပဳလူနာထုတ္ျပန္ရာမွာ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မွ လူနာ(၆)ဦးအထိပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။၎တို႔အထဲမွ Case(034-035-036-037)တို႔ဟာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းတက္ခဲ့တဲ့ ရာဇဝင္႐ွိခဲ့သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ဘုရားေက်ာင္းတက္ခဲ့တဲ့အထဲမွာ အဆိုေတာ့မ်ိဳးႀကီးလည္း ပါဝင္ခဲ့ပုံရပါတယ္။ထိုေၾကာင့္ Case 037 ဟာ အဆိုေတာ္မ်ိဳးႀကီးဆိုၿပီး သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာပါတယ္။
သိုေသာ္ မ်ိဳးႀကီးရဲ႕အမ်ိဳးသမီးကေတာ့ Case 037 ဟာ မ်ိဳးႀကီးမဟုတ္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖ႐ွင္းထားပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္း ေရာဂါျဖစ္သူမ်ားႏွင့္အတူ ဘုရားေက်ာင္းအတူတက္ခဲ့တာေၾကာင့္ အဆိုေတာ္မ်ိဳးႀကီး ရဲ႕မိသားစုအား Quarantine ဝင္ရန္ေခၚေဆာင္သြားတယ္လို႔သိရၿပီးလူမႈကြန္ယက္မွာလည္း “ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ခ်မွတ္ထားတဲ့စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာသြားမွပါလို႔”ေရးသားထားပါတယ္။
ကိုမ်ိဳးႀကီးေရ ေရာဂါပိုးမေတြ႕ပါေစနဲ႔လို႔ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္ 🙏
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန MOM က work pass ကိုင်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ကို pass ပြန်သိမ်းပြီး #စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရာသက်ပန်ဘန်းလိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလူဟာ မရှိမဖြစ်လုပ်ငန်းမျိုးမှာ လုပ်ရတာဖြစ်ပြီး ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာ အလုပ်သွားပါတယ်။
သူဟာ အလုပ်ပြီးတော့ ထမင်းသွားစားတယ်။ ပြီးတော့ အိမ်တန်းမပြန်ပဲ နေရာအချို့ကို အချိန်အတော်ကြာ လမ်းသလားခဲ့ပါတယ်တဲ့။
အဲ့ဒီတော့ စင်ကာပူက အမျိုးတို့ရေ……
ကိုယ်ဟာ အလုပ်ကို မဖြစ်မနေသွားရရင်တောင် #ယောင်လို့လမ်းမသလားကြဖို့ သတိပေးပါရစေ။
Circuit Breaker က အစက သတိပေး၊ နောက်တော့ ဒဏ်ငွေ၊ ပြီးမှ တရားစွဲဆိုပေမယ့် အခုတော့ အလုပ်ပါမစ်ပါသိမ်းနေပါပြီလို့။
စင်ကာပူမှာ ဥပဒေက အသက်ပါ။
Credit Richard Myo Thant
🇸🇬 စင္ကာပူက #ျမန္မာေတြသတိျပဳၾကဖို႔။
အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန MOM က work pass ကိုင္ထားတဲ့သူတစ္ေယာက္ကို pass ျပန္သိမ္းၿပီး #စင္ကာပူမွာအလုပ္လုပ္ခြင့္ရာသက္ပန္ဘန္းလိုက္ပါတယ္။
အဲ့ဒီလူဟာ မ႐ွိမျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ိဳးမွာ လုပ္ရတာျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ9ရက္ေန႔မွာ အလုပ္သြားပါတယ္။
သူဟာ အလုပ္ၿပီးေတာ့ ထမင္းသြားစားတယ္။ ၿပီးေတာ့ အိမ္တန္းမျပန္ပဲ ေနရာအခ်ိဳ႕ကို အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ လမ္းသလားခဲ့ပါတယ္တဲ့။
အဲ့ဒီေတာ့ စင္ကာပူက အမ်ိဳးတို႔ေရ……
ကိုယ္ဟာ အလုပ္ကို မျဖစ္မေနသြားရရင္ေတာင္ #ေယာင္လို႔လမ္းမသလားၾကဖို႔ သတိေပးပါရေစ။
Circuit Breaker က အစက သတိေပး၊ ေနာက္ေတာ့ ဒဏ္ေငြ၊ ၿပီးမွ တရားစြဲဆိုေပမယ့္ အခုေတာ့ အလုပ္ပါမစ္ပါသိမ္းေနပါၿပီလို႔။
စင္ကာပူမွာ ဥပေဒက အသက္ပါ။
ဒီနေရာ(၇)ခုရဲ့ တစ်နေရာရာမှာ မှဲ့ပါတဲ့သူတွေရဲ့ ကံကြမ္မာ
မှဲ့ နဲ့ပတ်သက်ပြီးအယူအဆ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ မှဲ့တစ်ခုစီတိုင်းမှာဘဝနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ မက်ဆေ့ချ် တစ်ခုစီ ရှိပါတယ်လို့ မှဲ့ပညာရှင်တွေက ဆိုထားကြပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နေရာအမျိုးမျိုးမှာမှဲ့တွေရှိနိုင်ပြီး အခုဖော်ပြမယ့် နေရာတွေမှာရှိတဲ့ မှဲ့တွေကတော့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ကြွယ်ဝခြင်းကိုပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်။
နှုတ်ခမ်းအပေါ်ဘက်မှာ ရှိတဲ့ မှဲ့
အရမ်းကို ကောင်းတဲ့မှဲ့တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ရွယ်တူတန်းတူတွေထက် ငွေကြေး၊ အောင်မြင်မှု ပိုမိုရရှိတတ်တဲ့မှဲ့လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမှဲ့ပိုင်ရှင်တွေက ခေါင်းနည်းနည်းမာတဲ့ သဘာဝရှိပေမဲ့ ဘာပဲလုပ်လုပ် အရမ်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အောင်မြင်တတ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
နှာခေါင်းရဲ့တစ်ဘက်တစ်ချက်မှာမှဲ့ရှိနေမယ်ဆိုရင်သေချာပေါက်ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့ လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ ငွေကြေးနှစ်ခုစလုံးကအသက် ၃၀ နောက်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ်အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ရရှိတတ်ပါတယ်။
ညာဘက်ပါးပေါ်မှာ ထင်ရှားပြီး ပြတ်သားတိကျတဲ့ မှဲ့တစ်လုံး ရှိမယ်ဆိုရင်အိမ်ထောင်ပြုပြီး နောက်မှာ အရမ်းကိုချမ်းသာကြွယ်ဝလာမယ်လို့ သိနိုင်ပါတယ်။
မျက်ခုံး/ မျက်လုံးနှစ်ခုကြားက မှဲ့
မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားမှာဖြစ်ဖြစ်၊ မျက်လုံးနှစ်လုံးကြားမှာဖြစ်ဖြစ် မှဲ့တစ်လုံး ရှိမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာပြီး ဘဝတစ်ခုကို သာသာယာယာနဲ့ အခြေချနိုင်မယ့် သူတစ်ဦးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘဝမှာ တောင့်တစရာမလို ဘဲ ငွေကြေးပြည့်ပြည့် စုံစုံနဲ့ နေရတတ်ပါတယ်။
ခါးရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့ မှဲ့က ကံကောင်းခြင်းရော ကံဆိုးခြင်းရော နှစ်မျိုးစလုံး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်း ပြည့်စုံကြွယ်ဝပြီး ကြီးပွားတိုးတက်မှာ ဖြစ်ပေမဲ့ ဘဝရဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာ ဝမ်းနည်းစရာ၊ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေကြုံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ညာဘက်လက်ဝါးပြင်မှာ မှဲ့ရှိရင် ဘဝမှာအောင်မြင်မှုနဲ့ ကြွယ်ဝမှုနှစ်မျိုးလုံး ရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းမယ့်အချိန် ကလက်ဝါးပြင်ပေါ်က မှဲ့ရဲ့တည်နေရာအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။
မှဲ့က လက်ဝါးရဲ့ အပေါ်ပိုင်းမှာရှိမယ်ဆိုရင်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ကစပြီး အောင်မြင်ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပြီးလက်ဝါးရဲ့ အောက်ပိုင်းမှာရှိမယ်ဆိုရင်အသက်ရလာတဲ့အချိန်မှာမှစည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနိုင်မှာပါ။
ရင်ဘတ်ရဲ့ညာဘက်အခြမ်းမှာ ရှိတဲ့မှဲ့က စည်းစိမ်ဥစ္စာအများအပြားပိုင်ဆိုင်စေပြီး ဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်ခြင်းကို ပြတဲ့မှဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးစေ့ပေါ်မှာရှိတဲ့မှဲ့က စည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ ပတ်သက်ရင်ကံကောင်းခြင်းကို ပြပေမဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် အား နည်းပြီး အထီးကျန်နေရတတ်တဲ့ သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထပ်တိုးအတည်ပြုလူနာ(၁)ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ထိုလူနာမှာ သေဆုံးသွားခဲ့သဖြင့် စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ ၄ဦးထိရှိလာ
COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၁၂-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ
၁။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ ယနေ့ COVID-19 ရောဂါအတွက်ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုပထမအသုတ်အားစစ်ဆေးမှုတွင် စောင့်ကြည့်လူနာများ၊ဆေးရုံများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ နေရာများ၌အသွားအလာကန့်သတ်၍စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခံနေသူများစုစုပေါင်း(၉၃)ဦး၏ဓာတ်ခွဲနမူနာများအားစစ်ဆေးခဲ့ရာ(ဇယား-၁)၌ဖော်ပြထားရှိသောလူနာ(၁)ဦး၏ဓာတ်ခွဲအဖြေတွင် COVID-19 ရောဂါပိုး တွေ့ရှိ (တွေ့ရှိ)ရပြီးကျန်လူနာများနှင့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုခံနေသူ (၉၂)ဦး၏ဓာတ်ခွဲအဖြေများတွင် COVID-19 ရောဂါပိုးမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါ သည်။(COVID-19 ရောဂါပိုး တွေ့ရှိ (တွေ့ရှိ)မှုသတင်းကိုယနေ့ညနေ (၆:၃၀)တွင်သတင်းအကျဉ်း ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါသည်။)
၂။ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ(Case-039) သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ပန်းဘဲတန်းမြိို့နယ်တွင်နေထိုင်သူအသက် (၈၅) နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ဦးသည် (၉-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ဖျားခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်းလက္ခဏာများစတင်ခံစားခဲ့ရသဖြင့်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့(၁၁-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင်သွားရောက်ပြသခဲ့ရာစောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ်သတ်မှတ်၍ဓာတ်ခွဲ နမူနာရယူစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါလူနာသည် လွန်ခဲ့သော(၁၄)ရက်အတွင်းပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ခရီးသွားလာသောရာဇဝင်မရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပြီး ဆီးချိုရောဂါနှင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအခံရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။လူနာမှာ ဆေးရုံစတင်တက်ရောက်သည့်အချိန်တွင်အလွန်မောပန်းလျက်ရှိပြီးသွေးတွင်းအောက်စီဂျင်ဓာတ်များကျဆင်းလျက်ရှိရာလိုအပ်သောကုသမှုများပေးခဲ့သော်လည်း(၁၂-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက်(၆:၀၀)နာရီအချိန်ခန့်တွင်သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။သေဆုံးရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါ၊ဆီးချိုရောဂါ၊သွေးတိုးရောဂါနှင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအခံ ရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ယခုအခါ (၂၃-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၁၂-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီအချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ(၃၉)ဦး တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၄။သို့ဖြစ်ရာ COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများမှာချင်းပြည်နယ်၊တီးတိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင်(၃)ဦး၊ရန်ကုန်မြို့၊ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံကြီးတွင်လူနာ(၂၆)ဦး၊ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊လားရှိုးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင်(၁)ဦး၊မော်လမြိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင်လူနာ(၁)ဦး၊စဝ်စံထွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင်လူနာ(၁)ဦး၊စုစုပေါင်း(၃၂)ဦးတို့ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာတည်ငြိမ်လျက်ရှိပါသည်။ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံကြီးရှိလူနာ(၁)ဦးအားအထူးကြပ်မတ်ခန်း၌သီးခြားထားရှိဆေးကုသမှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
၅။အဆိုပါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများနှင့် ထိတွေ့ခဲ့သူများအားလုံးကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်၍ အသွားအလာကန့်သတ်ကာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍အဆိုပါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများနှင့်အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့သည့် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် နီးစပ်ရာကျန်းမာရေးဌာနသို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားစေလိုကြောင်း တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း(၁၂-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀) နာရီ
၁။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ ယေန႔ COVID-19 ေရာဂါအတြက္ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈပထမအသုတ္အားစစ္ေဆးမႈတြင္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာမ်ား၊ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေနရာမ်ား၌အသြားအလာကန္႔သတ္၍ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈခံေနသူမ်ားစုစုေပါင္း(၉၃)ဦး၏ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားအားစစ္ေဆးခဲ့ရာ(ဇယား-၁)၌ေဖာ္ျပထား႐ွိေသာလူနာ(၁)ဦး၏ဓာတ္ခြဲအေျဖတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕႐ွိ (ေတြ႕႐ွိ)ရၿပီးက်န္လူနာမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈခံေနသူ (၉၂)ဦး၏ဓာတ္ခြဲအေျဖမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးမ႐ွိေၾကာင္းေတြ႕႐ွိရပါ သည္။(COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕႐ွိ (ေတြ႕႐ွိ)မႈသတင္းကိုယေန႔ညေန (၆:၃၀)တြင္သတင္းအက်ဥ္း ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။)
၂။ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ(Case-039) သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ပန္းဘဲတန္းၿမိိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္သူအသက္ (၈၅) ႏွစ္အ႐ြယ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ (၉-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ဖ်ားျခင္း၊ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းလကၡဏာမ်ားစတင္ခံစားခဲ့ရသျဖင့္ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးသို႔(၁၁-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္သြားေရာက္ျပသခဲ့ရာေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္သတ္မွတ္၍ဓာတ္ခြဲ နမူနာရယူစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါလူနာသည္ လြန္ခဲ့ေသာ(၁၄)ရက္အတြင္းျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးသြားလာေသာရာဇဝင္မ႐ွိခဲ့ေၾကာင္းသိ႐ွိရၿပီး ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါအခံ႐ွိေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။လူနာမွာ ေဆး႐ုံစတင္တက္ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္အလြန္ေမာပန္းလ်က္႐ွိၿပီးေသြးတြင္းေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္မ်ားက်ဆင္းလ်က္႐ွိရာလိုအပ္ေသာကုသမႈမ်ားေပးခဲ့ေသာ္လည္း(၁၂-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၆:၀၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ေသဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။ေသဆုံးရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမွာျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ၊ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ေသြးတိုးေရာဂါႏွင့္ ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါအခံ ႐ွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
၃။ယခုအခါ (၂၃-၃-၂၀၂၀)ရက္ေန႔မွ (၁၂-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ(၃၉)ဦး ေတြ႕႐ွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
၄။သို႔ျဖစ္ရာ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားမွာခ်င္းျပည္နယ္၊တီးတိန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံတြင္(၃)ဦး၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးတြင္လူနာ(၂၆)ဦး၊႐ွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊လား႐ိႈးျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးတြင္(၁)ဦး၊ေမာ္လၿမိဳင္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးတြင္လူနာ(၁)ဦး၊စဝ္စံထြန္းျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးတြင္လူနာ(၁)ဦး၊စုစုေပါင္း(၃၂)ဦးတို႔ျဖစ္ၿပီး၎တို႔၏က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာတည္ၿငိမ္လ်က္႐ွိပါသည္။ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီး႐ွိလူနာ(၁)ဦးအားအထူးၾကပ္မတ္ခန္း၌သီးျခားထား႐ွိေဆးကုသမႈေပးလ်က္႐ွိပါသည္။
၅။အဆိုပါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့သူမ်ားအားလုံးကိုစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္၍ အသြားအလာကန္႔သတ္ကာေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍အဆိုပါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားႏွင့္အနီးကပ္ထိေတြ႕ခဲ့သည့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ နီးစပ္ရာက်န္းမာေရးဌာနသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
← Previous Page1 … Page218 Page219 Page220 … Page222 Next →